"Fugas", akwukwo ohuru nke onye egwu James Rhodes | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«Fugas», akwukwo ohuru nke onye egwu egwu James Rhodes
"Leaks" ma ọ bụ nchegbu nke mmetụta dị ndụ, bụ akwụkwọ ọhụụ nke onye egwu James rhodes, nke ị nwere ire ere kemgbe November 18 gara aga.
Ọ bụ akwụkwọ autobiographical, nke James Rhodes, na mgbakwunye na-ekwu banyere egwu doro anya, na-ekwu maka mgbu ya, nhụjuanya ya na otu esi aga n'ihu na-ebi n'agbanyeghị ya. Na-esote, ana m ahapụrụ gị nkọwa nke ya na ahịrịokwu ụfọdụ m gụworo n’aka ya nke dọọrọ uche m.
Nkọwa nke akwụkwọ
Nye ọtụtụ n'ime anyị na nkụda mmụọ ma ọ bụ nchekasị, naanị mmegide, nke igosipụta "nkịtị," bụ ihe na-emenye ụjọ, na-egbu mgbu, ma n'otu oge ahụ dị egwu.
Bilie n'akwa, ịkpọrọ ụmụaka gaa ụlọ akwụkwọ, ịga ọrụ, ịkwadebe ihe ha ga-eri… Ihe a niile nwere ike ịbụ ezigbo ihe ịga nke ọma maka ndị ga-agba mbọ karịa ike mmadụ ka ha wee kwụ ọtọ. Kedu ka ị ga - esi ga n'ihu? Kedu otu esi eme ihe ị na-eme, ụbọchị ọ bụla, dị ka echiche ndị mmadụ nwere banyere gị na otu ọha mmadụ si atụ anya ka ị mee ya, mgbe ihe ịchọrọ n'ezie bụ ịzobe ma pụọ?
En "Leaks", James Rhodes na-agba mbọ ịchọpụta otu esi eme ka a ghara ịnagide ya na ọnọdụ ndị a na-apụghị ichetụ n'echiche. N'ime ọnwa ise nke ịgagharị egwu na-agwụ ike, na-eme n'ihu ọtụtụ puku mmadụ na ụlọ ọrụ na-enweghị isi nke olu ahụhụ na isi ya, James hapụrụ n'enweghi nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịmekọrịta uche anụ ọhịa na nke dara ada.
N'ụzọ dị mma, ọ ka nwere egwu ahụ, mgbe niile. Bach, Chopin, Beethoven ... Grail Ya Dị Nsọ, usoro nlanarị ya. Naanị nke ahụ.
Ndị a bụ ihe ncheta dị mkpa ma dịkwa mkpa. Banyere ịnagide usoro a mgbe ị na-eche na ị nweghị ike ịgbanahụ ara. Na ịghara ịtọ ntọala maka obi ụtọ dị elu. Banyere ịnakwere ndụ ahụ bụ ihe ezughị oke na ọgba aghara.
James Rhodes na-enyocha akụkọ ifo banyere ịda mba, nchekasị, na nchekasị (ihe otiti nke ọha mmadụ taa), na-agbasa ha n'ime otu nde, ma jiri obi mbinye aka nke ịkpa ọchị na mmetụta wughachi ha.
Gịnị bụ ezigbo ihe ọhụrụ? Na ihe niile ga-adị mma. Naanị nke ahụ.
Anyị na-eche na ọ bụ akwụkwọ nwere ike inyere ọtụtụ ndị na-arịa ịda mbà n'obi aka nakwa na, dị ka James Rhodes, mgbe ụfọdụ ha anaghị ahụ "mgbapụ" na nhụjuanya ahụ. Ọ bụ edezi ya Akwụkwọ Blackienwere 288 peeji na ọnụahịa nke 19,90 euro.
Ukwuu na-atụ aro!
James Rhodes kwuru
Dika m kwuru na mbido, ahapuru m gi edemede ufodu nke onye egwu ahu nke dọtara uchem. Fọdụ n'ihi obi ọjọọ ha, ndị ọzọ n'ihi mwute nke eziokwu ha ...
“Egwu bụ ọgwụ kacha amasị ndị na-eto eto gburugburu ụwa. Na-enye nkasi obi, amamihe, olileanya, na ịhụnanya; Ọ na-eme ya kemgbe ọtụtụ puku afọ. Obu ogwu diri nkpuru obi ”.
«Nwa m nwoke bụ ma nọgide na-abụ ọrụ ebube. Agaghị m enweta ihe ọ bụla ná ndụ nke a ga-eji tụnyere atụ bọmbụ atọm nke ịhụnanya gbawara mgbe a mụrụ ya.
N'ime oge elekere iri abụọ na anọ ọ bụla adịghị oge dị njọ karịa elekere anọ nke ụtụtụ. Eziokwu bụ na oge dị n'etiti 3:30 na 4:30 na-emejọ shit. "
«... Guzosie ma pụọ ​​n'ụwa. Mara na ọ ga-afụ ụfụ. Na ubochi gi gha adi ogologo ».
"Enwere igodo iri asatọ na asatọ na piano na, n'ime ha, eluigwe na ala dum."
"Mmegbu na-eme ka ị bụrụ onye lanarịrị ndụ."
Chọta ihe ị hụrụ n'anya ma hapụ ya ka ọ gbuo gị. "
«Egwuregwu azọpụtala ndụ m n’ụzọ nkịtị ... Ọ na-enye ụlọ ọrụ mgbe enweghị, nghọta mgbe ọgba aghara na-achị, nkasi obi mgbe enwere nhụjuanya, na ume dị ọcha na nke enweghị mmetọ mgbe ihe foduru bụ mkpofu efu nke mbibi na ike ọgwụgwụ. .
Ọ bụ eziokwu na ha kwuru na egwu na-azọpụta anyị? Egwu na akwukwo, m ga agbakwunye ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » «Fugas», akwukwo ohuru nke onye egwu egwu James Rhodes
Ọgụgụ 5 gbara ọkpụrụkpụ maka Black Friday (ma ọ bụ Saxon Black Friday)